ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Shaker သတ်မှတ်ရန်နှင့်အတူအမွှေးအကြိုင်တက်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်, ဒီကြော့ဒီဇိုင်းကိုသင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာမီးမောင်းထိုးပြဖြစ်ခြင်းနှင့်ခရစ္စမတ်အမေရဲ့နေ့, မွေးနေ့သို့မဟုတ် housewarming တူသောအခါသမယများအတွက်သင့်မိသားစု & guests.Perfect ဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများ၏ချီးမွမ်းဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ မဆိုစားဖိုမှူးသို့မဟုတ် home ထမင်းချက်ဘို့ကြီးသောလက်ဆောင်တစ်ခု!
♦ဒါဟာဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Shaker မသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်! ဒါဟာအစတစ်အလွအိမ်မှာပုံစံမျိုးပါ!
ဒါကစမတ်ဒီဇိုင်းနှင့်သာသနာယန္တရားထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းသာသင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာမဟုတ်ဘဲအားလုံးသင့်ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာကျော်တက်အဆုံးသတ်သေချာ, ဒါကြောင့်သင်အဆက်မပြတ်သင့်စားပွဲပယ်ဆား & ငရုတ်ကောင်းရှုပ်ထွေး clean up လုပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
အကြီးစားအရွယ်အစား: 36 * 92mm; အလတ်စား Size: 45 * 55mm; အသေးစားအရွယ်အစား: 64 * 38: မီလီမီတာ
80X38X57.5cm: စက္ဏူထူ, စက္ဏူထူအရွယ်အစားနှုန်း 50.5pcs
အဆိုပါဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Shakers ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေ:
ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အတူ3ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းသေတ္တာကလေး:
အကြီးစားအရွယ်အစား: 36 * 92mm;
အလတ်စား Size: 45 * 55mm;
အသေးစားအရွယ်အစား: 64 * 38: မီလီမီတာ
သင့်ရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ဦးထုပ်ဖမ်းပြီးညင်ညင်သာသာကထွက်ကြွလာသည်အထိပြုလုပ်ဆွဲထုတ်။ ဒါကြောင့်အရပျ၌ပြန်ပေါ်လာသည်အထိထို့နောက်ညင်ညင်သာသာပြန်နှင့်စာနယ်ဇင်းထုပ်ကိုနေရာချ, ထုမြေပြင် peppercorn သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, ပန်းရောင်ဟိမဝန္တာဆား, ပင်လယ်ဆားသို့မဟုတ် kosher ဆားနှင့်အတူယူနစ်ဖြည့်ပါ!